हेर्नुहोस् धनकुटाको समानुपातिक बिवरण, कस्ले कति मत पाए ? « Dhankuta Khabar
हेर्नुहोस् धनकुटाको समानुपातिक बिवरण, कस्ले कति मत पाए ?
धनकुटा खबर । एक प्रतिनिधिसभा र दुइ प्रदेश सभा गरी धनकुटाका तिनै स्थानमा बिजयी भएको एमाले समानुपातिक तर्फ पनि पहिलो पाटी बन्न सफल भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा तर्फ जिल्लामा खसेको कुल ६८ हजार ७ सय ७२ मत मध्ये ३० हजार ९ सय ४७ मत एमालेले प्राप्त गरेको हो । दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको कांग्रेसले १२ हजार ३ सय २० र तेस्रो स्थानमा रहदै माओवादी केन्द्र ७ हजार ४ सय ७९ मत प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै राप्रपा प्रजातान्त्रीकले ६ हजार १ सय ६१ मत प्राप्त गर्दा संघिय समाजबादी फोरमले २ हजार ५ सय ५४ मत प्राप्त गरेको छ । जिल्लामा प्रतिनिधि सभा तर्फ कुल ४९ दलले खाता खोल्दा ५ हजार ६ सय ६० मत बदर भएको छ ।
यता प्रदेश क मा एमालेले १३ हजार ९ सय ९६ मत प्राप्त गर्दा काग्रेसले ७ हजार ६ सय २, माओवादी केन्द्रले ३ हजार ९ सय ११ संघिय समाजबादी फोरमले २ हजार २५ र राप्रपा प्रजातान्त्रीकले १ हजार १ सय ५९ मत प्राप्त गरेको छ । प्रदेश क मा कुल ३६ हजार ३ सय १५ मत झरेकोमा ४ हजार ८ सय ५५ मत बदर हुदा २७ दलले खाता खोलेका थिए ।
प्रदेश ख मा भने एमालेले १४ हजार ३ सय ३२ मत, राप्रपा प्रजातान्त्रीकले ३ हजार ७ सय ३८, माओवादी केन्द्रले ३ हजार ६ सय ९० र कांग्रेसले ३ हजार ६ सय ४९ मत प्राप्त गरेको छ । यहा कुल ३२ हजार ४ सय ५७ मत खस्दा ४ हजार ७ सय ४५ मत बदर भएको छ । त्यस्तै २७ दलले खाता खोलेका छन् ।